डेब्यू आइपिएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने ५ खेलाडी
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) १४ औं संस्करण अर्को साता देखि भारतका ६ सहरमा सुरु हुँदैछ । आइपिएलका ८ फ्रेन्चाइज टोलीलेनै आफ्नो तयारीलाई तीव्र रुपमा अघि बढाएका छन् ।
अप्रिल ९ देखि सुरु हुने आइपिएलमा थुप्रै खेलाडीले डेब्यू गर्दैछन् । केहि खेलाडी डेब्यू प्रतियोगितामै टोलीको प्रमुख हतियारको रुपमा खेल्दै छन् । केहि खेलाडीले टोलीका आवश्यकता अनुसार डेब्यू पाउने छन् । धेरै खेलाडीको आइपिएल खेल्ने सपना हुन्छ । आइपिएलमा नाम, दाम मात्र होईन लोकप्रियता पनि त्यतिनै धेरै छ ।
आइपिएलमा ४ मात्र विदेशी खेलाडी खेल्न पाउनी हुँदा टोलीको आवश्यकता र सन्तुलनलाई धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । खेलाडी उत्कृष्ट भएर मात्र मौका पाउँदैन टोलीको आवश्यकता र सन्तुलनमा पनि ध्यानदिनुपर्ने हुन्छ । आइपिएल २०२१ मा डेब्यू गर्दै उच्च प्रदर्शन गर्न सक्ने पाँच खेलाडी यस प्रकार छन् ।
५. फिन एलेन (बेंगलोर)
अष्ट्रेलिया युवा विकेटकिपर जोश फिलिपेले नखेल्ने भएपछि रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले न्युजिल्यान्डका २१ वर्षिय विकेटकिपर फिन एलेनलाई टोलीमा अनुबन्ध गरेको थियो । एलेनले यसै साता बंगलादेशविरुद्ध टि२० आई क्रिकेटमा डेब्यू गरेका थिए । एलेन आक्रामक ब्याटिङ गर्ने गर्दछन् ।
बंगलादेशविरुद्ध तेस्रो टि२० आई खेलमा एलेनले २९ बलमा १० चौका र ३ छक्का सहित ७१ रनको उत्कृष्ट इनिङ खेलेका थिए । बेंगलोरको ओपनिङ एलेन र देवदत्त पाडिक्कले गर्ने सम्भावना छ । बेंगलोरले चार विदेशी खेलाडीमा एवि डी भिलियर्स र ग्लेन म्याक्सवेल पहिलो रोजाईमा खेल्ने छन् ।
जामिसन, केन रिचर्डसन, एलेन, ड्यानियल साम्स, डेन क्रिष्टियन र एडम जाम्पा मध्य दुईलाई मौका दिने छ । फिलिपेलाई गतवर्ष पाँच खेलमा मौका दिएको थियो । एलेनलाई ओपनिङ गराउँदा बेंगलोरको ब्याटिङ लाइनअप थप मजबुत हुन जान्छ । एलेन बेंगलोरको सरप्राइज प्याकेज बन्न सक्छन् ।
कल्यान्ड र न्युजिल्यान्डको यू-१९ टोलीबाट खलि सकेका उनले यस सिजनको सुपर साम्स वेलिंग्टनबाट खेल्दै सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेका थिए । उनले ११ खेलमा १ सय ९३ को स्ट्राइकरेटमा कुल ५ सय १२ रन बनाएका थिए । जसमा ५६ चौका र २५ छक्का सामेल थियो । फिनको उच्च प्रर्दशनको सहयोगमा वेलिंग्टनले सुपर साम्स टि२० उपाधि जितेको थियो ।
४. शाहरुख खान (पन्जाब)
२५ वर्षिय फिनिसर ब्याट्सम्यान शाहरुख खानले पन्जाब किंग्सबाट डेब्यू आइपिएल खेल्दै छन् । तल्लोक्रममा आक्रामक ब्याटिङको क्षमता राख्ने शाहरुख खान पन्जाबको टोली हेर्दा पहिलो रोजाईमा खेल्ने सम्भावना देखिन्छ । शीर्षक्रम लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल, डेविड मलानले सम्हाल्दा मध्यक्रममा निकोलस पुरन हुने छन् । तल्लोक्रममा शाहरुख खान रहने छन् । उनको प्रदर्शन पनि महत्वपूर्ण रहने छ ।
पन्जाबले शाहरुखलाई ५ करोड २५ लाख भारु खर्चिदै टोलीमा अनुबन्ध गरेको थियो । शाहरुखलाई किन्न अक्सनमा पन्जाब, कोलकाता, दिल्लीबीच प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तामिल नाडुलाई यस सिजनको शैद मुश्ताक अली ट्रफी उपाधि दिलाउन शाहरुख खानले उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । फिनिसर खानले आफ्नो लयलाई निरन्तरता दिँदै डेब्यू प्रतियोगितामा उच्च प्रदर्शन गर्न सक्छन् ।
३.काइल जामिसन (बेंगलोर )
न्युजिल्यान्डका तीव्र गतिका बलिङ अलराउन्डर काइल जामिसन बेंगलोरबाट आइपिएल खेल्दै छन्। जामिसनलाई बेंगलोरले अक्सनमा १५ करोड भारु खर्चेको थियो । आफ्नो प्रमुख तीव्र गतिको कमजोर बलिङ सुधार गर्नको लागि बेंगलोरले महँगो मूल्य खर्चेको थियो । बेंगलोरको तीव्र गतिको बलिङ मुख्य समस्या हुँदा पहिलो रोजाईमा खेल्ने सम्भावना देखिन्छ ।
जामिसनले डेब्यू प्रतियोगितामै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्छन् । जामिसनले तीव्र गतिमा बलिङ गर्दा तल्लोक्रममा ठूला सटको क्षमता राख्छन् । जामिसन न्युजिल्यान्डबाट लगातार उच्च प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । बंगलोरको टोलीमा पनि त्यस्तै प्रदर्शनको आशा गरिएको छ ।
२. डेविड मलान (पन्जाब)
इंग्ल्यान्डका शीर्षक्रमका बायाँ हाते ब्याट्सम्यान डेविड मलान आइसिसी टि२० वरियतामा शीर्षस्थानमा रहेका खेलाडी हुन् । इंग्ल्यान्डको टोलीबाट लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका मलान पन्जाबबाट डेब्यू आइपिएल खेल्दै छन् । पन्जाबको तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गर्ने मलानले डेब्यू प्रतियोगितामै उत्कृष्ट प्रभाव छोड्न सक्छन् ।
मलानले २४ खेलमा १ शतक, १० अर्धशतक सहित १ हजार ३ रन बनाएका छन् । मलान टि२० आईमा सर्वाधिक छिटो एक हजार रन पूरा गर्ने ब्याट्सम्यान । शीर्षक्रममा मलानको प्रदर्शन पन्जाबको लागि पनि निकै महत्वपूर्ण हुने छ । राम्रो लयमा मलानले आइपिएलमा पनि उच्च प्रदर्शन गर्न सक्छन् । पन्जाबले १ करोड ५० लाख भारुमा अनुबन्ध गरेको थियो ।
१. झेय रिचर्डसन (पन्जाब)
अष्ट्रेलिया तीव्र गतिका बलर झेय रिचर्डसनले पनि पन्जाबबाट आइपिएल खेल्दै छन् । रिचर्डसन पन्जाबको मोहम्मद शामी पछिका प्रमुख तीव्र गतिका बलर हुन् । चार विदेशी कोटामा पनि पहिलो रोजाईमा खेल्ने छन् । २४ वर्षिय रिचर्डसन आइपिएलमा डेब्यु गर्दै छन् । दुई महिना अघि सम्पन्न बिग ब्यास लिगमा पर्थ स्कोचर्सबाट उनले सर्वोत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै सर्वाधिक विकेट लिने सूचिमा शीर्षस्थानमा थिए ।
रिचर्डसनले विग ब्यासमा १७ खेलमा २९ विकेट लिएका थिए । उनले पावरप्ले, मध्यक्रम र डेथ ओभर सबैमा उत्कृष्ट बलिङ गर्ने गर्दछन् । उनले कुनैपनि समय नयाँ र पुरानो बल दुबैमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्ने क्षमता राख्छन् । रिचर्डसन तल्लोक्रममा ठूलो सटको क्षमता पनि राख्ने गर्दछन् । उनीलाई टोलीमा भित्र्याउन अक्सनमा पन्जाबले १४ करोड खर्चिएको थियो ।
IPL 2021: “Don’t think anyone can be like MS Dhoni”, Sanju Samson rejects comparisons with CSK skipper